Tonizia: Gidraka Momba Ny Hoavin’ny Televizionam-Panjakana · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Gidraka Momba Ny Hoavin'ny Televizionam-Panjakana
Voadika ny 29 Avrily 2012 12:10 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, polski, македонски, English
Tonga amin'ny famaranana azy tamin'ny 25 Avrily teo ny fitokonana mipetraka naharitra valo herinandro teo ivelan'ny biraon'ny televizionam-panjakana tao Tonizia. Nodradradradrain'ny mpanao fihetsiketsehana fa nanohana ny mpanao jadona voahongana Ben Ali ny televiziona Al Wataniya ka takiany ny “fanadiovana” azy. Nifanaraka ny hiala teo an-toerana ihany ny mpanao fihetsiketsehana rehefa nampanantena ny hisahana ity olan-dry zareo ity ny governemanta.
Lazain'ny mpitsikera, indrindra rehefa amin'ny fotoanan'ny vaovao be mpanaraka, fa manohitra ny Ennahda antoko mitondra amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny Al Wataniya. Voampanga ho manaratsy ny asan'ny governemanta ny orinasam-pampielezam-baovao. Nihanitombo sy nihahenjakenjana ny hetsika teo ivelan'ny Wataniya, izay ahitana mpanao fihetsiektsehana nitondra lamba famaohana sy tavoahangin-tsavony (eau de javel), mitaky ny “hanadio” ilay fampielezam-baovao, sy hanafika ny mpanao gazety.
Niteraka gidragidra ny filazan'ny solontenan'ny Ennahda ny amin'ny mety hanomezana amin'ny tsy miankina ny televizionam-panjakana. Niangaviana ny mpanao fihetsiketsehana ny hiala, ary nampanantena ny hamaly ny fitakiany ny governemanta, ka anisan'ny hojerena ihany koa ny resa-bola sy ny kolikoly ataon'ny mpitantana sy ny mpiasa tafiditra tamin'ny fanaovana fampielezan-kevitra an'i Ben Ali taloha.
Tranolay anoloan ny foiben ny televizionam-panjakana Toniziana. Saripika tuniculture.net (CC BY-NC-SA 3.0).
Nanontany ny fahombiazan'ny sit-in i Bilmirssad:
@Boukacheche_TN: أن تطالب بتطهبر ذاتي للتلفزة دون الكشف عن عناصر الفساد فيها فذلك يعني أن هدفك ابتزاز موظفيها بملفاتهم ليكونوا في صفك ‎‪#Tunisie‬‏ ‎‪#TTN‬‏
Ny fitakiana ny hanadiovanao ny televiziona tsy misy famongarana ny singan'ny kolikoly tao anatiny dia midika fa ny hanao chantage ny matihanina sy ny dosieny ianao mba hahatonga azy ireo hiara-dia aminareo
Niantso ny hanaovana fitsapana ny hevi-bahoaka manerana ny firenena ny governemanta rehefa nofaranan'ny mpanao fihetsiketsehana ny sit-in nataony. Misioka ny mpisera Twitter @tn_revo:
@tn_revo: فضيحة: الحكومة تستعين لإصلاح الاعلام بأشخاص ساهموا في تدجينه
Fanafintohinana: miantso ny vahoaka ny fitondrana hifehy media amin'ny fanavaozana azy
Misioka ny mpanolo-tsaina momba ny tetikady Selim Tanfous:
@Foustanovitch: Sinon.personne ne trouve que la privatisation de la #TTN est une énième tentative de dérouter l opinon publique vers d autres occupations?
Misy mahita ve fa tetika hafa hanodinana ny saim-bahoaka hifantoka amin-javatra hafa araka ny mahazatra ny fanomezana ny #TTN [Fahitalavi-panjakana Toniziaa] amin'ny tsy miankina?
Televiziona Toniziana "amidy". Saripika mpisera Flickr Mourad Dachraoui (CC BY-NC-SA 2.0).
Mitsikera ny tsy fahafaham-pon'ny fitondrana amin'ny media i Mohamed Nidhal Bettaieb:
@NidhalBettaieb: Sinon le #tnGov n'arrête pas d'insulter la #TTN , mais ne cesse d'être présent sur ses plateaux
Tsy mitsahatra ny manompa ny #TTN ny fitondrana Toniziana, saingy miseho sehatra ao hatrany
Misioka i Mehdi Charfi:
@___mehdi: bcp de bruit sur privatisation des medias publics.. je pense que meme pas en rêve, et ils le savent tres bien, c juste pour “faire peur”#TTN
tabatabaina ery ny fanomezana ho an'ny tsy miankina ny haino aman-jerim-panjakana… mieritreritra aho fa tsy hanao izany akory ry zareo na dia any amin'ny nofiny aza, ary fantany tsara izany, fa mba ho fampitahorana ny #TTN fotsiny